Cristiano Ronaldo oo qaadanaya go’aan adag isla markaana dib ugu laabanaya Premier League (Kooxdee ayuu ku biirayaa?) - Wargane News
Home Sports Cristiano Ronaldo oo qaadanaya go’aan adag isla markaana dib ugu laabanaya Premier...
Cristiano Ronaldo oo qaadanaya go’aan adag isla markaana dib ugu laabanaya Premier League (Kooxdee ayuu ku biirayaa?)
Cristiano Ronaldo ayaa qaadanaya go’aan adag oo aan u roonayn taageerayaasha Real Madrid, kadib markii uu dareemay in la qiyaamayo.
Laacibka reer Portugal ayaa dareensan in maamulka Real Madrid ay khiyaano u maleegayaan isaga, taas oo ah inay iska diraan dhamaadka xiliciyaareed kaan.
Hoos u dhac wayn ayaa soo wajahay qaab ciyaareedka Cristiano Ronaldo ee Real Madrid xiliciyaareed kaan, waxaana soo baxay warar sheegaya in kooxdu ay u isticmaali doonto isaga qaabkii ay ku soo xerogalin lahayd Neymar.
AS ayaa daaha ka qaaday in Cristiano Ronaldo uu doonayo inuu ka tago Real Madrid isla markaana uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Manchester United, kadib markii maamulka kooxdu uu ka jawaabi waayay codsigiisii ahaa in laga saxiixo heshiis cusub loona kordhiyo mushaarka.
“Dhabtii United waa ay ogtahay rabitaankiisa, sidoo kale Ronaldo ayaa u sheegay dadka u dhaw isaga inuu doonayo inuu dib ugu laabto Manchester United” ayaa lagu qoray warbixinta AS.
“Kadib Final-kii Cardiff, Ronaldo ayaa balan ka helay madaxwayne Perez kaas oo ah in loo kordhinayo heshiiskiisa isla markaana loo badinayo mushaarka, laakiin taasi ma dhicin, inkasta oo laacibku uu dhawr jeer ku celceliyay rabitaankiisa ah inuu sii joogo Madrid”.
“Laakiin jawaabta kooxdu ay ka bixisay fariintii Ronaldo ayaa noqtay isku daygii saxiixa Mbappe iyo haatan oo ay doonayaan Neymar”.
“Inkasta oo Ronaldo uu ku guulaystay 3-jeer Ballon d’Or 4-tii sano ee u danbaysay, hadana wuxuu ku fashilmay inuu ka mid noqdo 3-da laacib ee ugu mushaarka badan adduunka” ayeey sii raacisay AS.
Ronaldo ayaa ku jira booska 5-aad ee ciyaartoyda ugu mushaarka badan, wuxuuna qaataa sanadkii 21 milyan oo euro, Messi oo uu tartan kula jiro ayaa sanadkii ka hela kooxdiisa Barcelona 50 milyan oo euro, waxaana u dhexeeya farqi wayn.
Sababtaas ayaa ku kalifaysa Cristiano Ronaldo inuu qaato go’aan adag, isla markaana uu dib ugu laabto horyaalka ingiriiska.
Daawo Sawirad: Ururka Al-Shabaab Oo Soo Bandhigay Sawirada Dagaalkii Ay Ku Qaadeen Ciidamada Kenya Ee Ku Sugan Magaalada Kulbiyo